Gịnị Na-akpali Gị Sharekekọrịta N'ịntanetị? Psychology nke ringkekọrịta | Martech Zone
Anyị na-ekekọrịta kwa ụbọchị site na ntanetị blog na mmekọrịta anyị na ibe anyị. Ebumnuche anyị dị mfe - mgbe anyị chọtara ọdịnaya dị egwu ma ọ bụ chọpụta ihe n'onwe anyị, anyị chọrọ ka ị mara maka ya. Nke ahụ na-eme anyị njikọ nke nnukwu ozi ma na-enye gị, onye na-agụ akwụkwọ anyị uru. Site n'ime nke a, anyị na-etinye gị n'ọrụ ma nwee olile anya ime ka mmekọrịta anyị na gị mikwuo emie. Dịka ịmalitere ịtụkwasara anyị obi maka nnukwu ozi na akụrụngwa, anyị nwere ike ịgwa gị ndị nkwado na ndị mgbasa ozi ụfọdụ aro maka gị. Nke ahụ bụ ego dị mkpa iji mee ka blog anyị na-eto eto!
N'akụkụ nke aka m, ana m ekerịta ihe niile - site na ọchị, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mkpali. Bụ onye nwe azụmaahịa bụ ọrụ siri ike yabụ achọrọ m ịkụziri ndị na-abụghị ndị nwe ha yana ịmekọrịta ndị ọzọ n'ụzọ mmetụta uche iji mee ka ha mata maka mgbago na mgbada na ihe m mụtara n'aka ha. Uzo ndị ahụ na-adọrọ uche dị ukwuu n'ihi njikọ mmetụta uche ha.
Kekọrịta n'ịntanetị aghọwo akụkụ nke ndụ anyị kwa ụbọchị ma ọ na-aghọwanye ihe dị mkpa maka azụmahịa. Ihe omuma nke Statpro Psychology nke ringkekọrịta na-egosi otu anyị nwere ike isi bụrụ ndị akpọrọ ụdị 'ndị nkerịta' yana etu njirimara ndị ahụ, yana uto nke soshal midia, na-agbanwe ọrụ anyị n'ịntanetị… ma ọ bụ n'onwe ya; n'azụmahịa, ma ọ bụ ọbụlagodi otu ndị isi ọrụ anyị si ekere òkè.
Anyị maara ụlọ ọrụ ole na ole na-anaghị ekerịta ọdịnaya nke ọdịnaya ha. Eji m obi m niile na ọ bụ ozi ọjọọ izigara ndị na-agụ ya. Kinddị a kwuru na ị nwere mmasị ịre ha ma achọghị itinye ha n'ihe egwu ọ bụla iji nyere ha aka. Yuck… ndị ahụ abụghị ụdị folks m chọrọ iji azụmaahịa. Ọ bụrụ na ịchọta edemede, mbipụta, ma ọ bụ akụ dị ịtụnanya - kesaa ya! Ọ ga-eju gị anya na ịkwanyere ugwu na ikike ị nwere ike ibute site na ịnye uru na-enweghị atụmanya na a ga-akwụ gị ụgwọ maka ya.
Tags: infographicshare-ekere òkèịkekọrịta akparamaagwastatpro